Fianarantsoa : Zazalahy 15 taona mamaky trano
mercredi, 15 mars 2017 22:23
Ny 2 amin’ireo lahy sy vavy namaky trano voasambotry ny polisy ny alahady lasa teo dia zaza tsy ampy taona. Niakatra ny Fampanoavana ity alarobia 15 marsa ity ny raharaha araky ny vokatra azon’ny Commissariat ao Ankofafa niaraka tamin’ny Fokonolona izay nanoro sy nanome antotam-baovao.
Tafiditra ao anatin’ireo 11 tratran’ny mpitandro filaminana ny atidoha niketrika ireo vaky trano miisa 13 tao anatin’ny roa herinandro. 3 vavy no mpandray ny entana halatra, ny 8 kosa nanatanteraka ny asa ratsy.
Ny iray faha-12 izay tompon’ny trano fitobian’ny entana tao Ambalanonoka Andranomiadiloha dia lavon’ny balan’ny Polisy.
Tao anaty fanadihadiana no nahafantarana fa avy any Vohibola Befeta ireto mpamaky trano ireto ka 25 mahery ny totaliben’izy ireo indray manafika. Mbola karohana arak’izany ny 15 lahy iray tarika amin’izy ireo.
Miandalana araky ny fandaminana ny famerenana ny entan’ny olona niharan’ny halatra.